हिमालयन गल्फकोर्ष मन्थली मेडल गौचनलाई - Kheladi News Kheladi News
हिमालयन गल्फकोर्ष मन्थली मेडल गौचनलाई
पोखरा(खेलाडी न्युज)-हिमालयन गल्फ कोर्ष पोखरामा शनिबार सम्पन्न मन्थली मेडल गल्फ प्रतियोगिताको पुरस्कार गोविन्द गौचनले जितेका छन् । उनले ७० पारको कोर्षमा दुइ अण्डर ६८ खेले । उनी १८ ह्याण्डी क्याप हुन् । पार ७० को कोर्षमा उनले कुल ८६ को कार्ड बनाए । उनको ह्याण्डीक्याप घटाउदाँ १८ होल पुरा गर्दा दुई अण्डरसहितको ६८ को कार्डले मन्थली मेडल जिते ।
क्या. महेन्द्र फगामीले दोस्रो स्थानमा चिक्त बुझाए । उनी केही दिन अघि गोकर्ण गल्फ कोर्षमा आयोजित सुर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपमा समेत सहभागि थिए । तर उनी कटमा नजोगिदाँ दुईदिनपछि पोखरा फर्किएका थिए । उनले पार ७० को हिमालयन गल्फ कोर्षमा ७७ को कार्ड बनाए । उनी ५ ह्याण्डी क्याप हुन् । ह्याण्डीकप घट्दा उनी दुई ओभर ७२ मा रहदै दोस्रो स्थानमा चिक्त बुझाए ।
तेस्रो स्थानमा क्या. लाल गुरुङ रहे । उनी काउन्ट ब्याकमा फगामीभन्दा पछि परे । उनले ८२ को कार्ड बनाउँदा उनी दुई ओभर ७२ मा खेल टुग्याए । फगामीसँग टाई भएपनि काउन्ट ब्याकमा बोगी खेप्दै स्ट्रोक हिर्काएपछि तेस्रो स्थानमा चिक्त बुझाउन बाध्य भए । प्रतियोगितामा १७ जना गल्फरको सहभागिता रहेको हिमालयन गल्फ कोर्षका व्यवस्थापक भुवन गुरुङले बताए । विजेता खेलाडीहरुलाई कास्की जिल्ला गल्फ संघका अध्यक्ष मेजर लच्छिम गुरुङले ट्रफी प्रदान गरेका थिए ।